Yakasarudzika Simbi Isimbi Simbi Kutuka Uye Handrails Mugadziri | Jiannuo
Mugadziri weUinjiniya zvigadzirwa zvesimbi
Jiannuo Hardware Inowana Yakawanda Vatengi Kuzivikanwa Uye Kuonga Nakahwo hwakanaka
Inyanzvi kambani inobatanidza kutsvakiridza nekusimudzira, dhizaini, kugadzira, kutengesa, nekuisa engineering uye mushure mekutengesa, inonyanya kuita engineering simbi isina kuchengetedzwa zvimwe zvirongwa.
Sezvo airport yechinomwe yakanyanya kubatikana pane dzimwe nyika panguva ino, Changi Airport ndiyo airport huru yendege kuSouth Asia uye nzvimbo yakakosha yekufambisa muAsia. Changa ichangovhurwa Changi Airport terminal 4 chivakwa chine maviri-matura, 25-mita-yakakwirira chivakwa chine gross pasi nzvimbo yemamirimita mazana maviri nemashanu. Inotarisirwa kuwedzera iyo iripo yose yakapfuura mukana wevanosvika mamirioni makumi masere pagore. Semugadziri akasarudzika mumunda wehardware, Foshan Jiannuo Hardware Co, Ltd akaremekedzwa zvikuru kutora chikamu mune iyi projekiti nekubatana nemutengi wedu muSwitzerland. JN yainyanya kutarisana nesimbi isina chikamu chikamu: simbi isina chiraire railing system, isina chigadzirwa chesimbi-inorwisa kupokana kurira, nezvimwe.
Imwe yekupedzisira yekutengesa muOrchard Road isati yasvika kuCalic District, Orchard Central inzvimbo inoreba yakakura kwazvo yeSwitzerland ine zvivakwa zvakasarudzika zvakaita segirazi rayo kumeso uye yemuno muvhi wedhiza Matthew Ngui anotora ziso redhijitari. Iyo ine akawanda maficha ekuzvirumbidza pamusoro payo kusanganisira kumberi kuguta rekutanga reMedhiya-musika nzvimbo yekutengesa, iyo yakareba kupfuura yose mukati meimba Via Ferrata kukwira rusvingo, muunganidzwa mukuru wevazhinji veruzhinji kumisikidzwa neanopomerwa nyika dzekunze, iyo 24/7-inoshanda Roof Garden uye Discovery Walk. Semugadziri akasarudzika mumunda wehardware, Foshan Jiannuo Hardware Co, Ltd akaremekedzwa zvikuru kutora chikamu mune iyi projekiti nekubatana nemutengi wedu muSwitzerland. JN yainyanya kutarisana nesainless simbi chikamu: stainless iron railing system, nezvimwe.
I $ $> Marina Imwe, inonzi "GREEN HEART" kana "GREEN NEMAHARA", density yakakura, yakasanganiswa yekushandisa yakavakidzana mukati medunhu reSingapore marina Bay mari yezvematongerwo enyika, inokwanirisa Urban Redevelopment Authority's (URA) chiratidzo chekuita Singapore "Guta riri muBindu", chave chave kuita chivakwa chitsva chekuSwitzerland chikangopedzwa. Semugadziri akasarudzika mumunda wehardware, Foshan Jiannuo Hardware Co, Ltd akaremekedzwa zvikuru kutora chikamu mune iyi projekiti nekubatana nemutengi wedu muSwitzerland. JN yainyanya kutarisana nesimbi isina chinhu chikamu: simbi isina chando simbi yekumisikidza, isina chigadzirwa chesimbi simbi yekumisikidza, zvigadzirwa zvesimbi isina chinhu, simbi isina chinhu yekushongedza yemagetsi, electroplate mhete screen, isimbi yesimbi grating, isimbi yesimbi bhasiketi rack, isimbi yesimbi kusvetuka simbi. .
Sengkang Chipatara chirongwa chakakunda Mubairo wePlatinamu weSystem Building Authority's Green Building Mark. Iyo purojekiti, iyo inofukidza nharaunda inosvika mazana maviri nemakumi masere ezviuru emamirimita, ndiyo nzvimbo yekuchengetedza hutano. Iyo ine chipatara chepakati, chipatara chenharaunda uye makiriniki akati wandei. Kana wapedza, ichaitendera izvo zvinodikanwa zvekurapa zvevagari mu Sheng Gang zvigadziriswe zvakanaka. Semugadziri akasarudzika mumunda wehardware, Foshan Jiannuo Hardware Co, Ltd akaremekedzwa zvikuru kutora chikamu mune iyi projekiti nekubatana nemutengi wedu muSwitzerland. JN yainyanya kutarisana nesimbi isingaiti simbi: simbi isina chiraire railing system, simbi isina chimbi inodzivirira-kupwanya railing, simbi isina chimbi inodzivirira-inotsika cheki.
Jiannuo Hardware yakagadzira yakasimba tekinoroji inotungamirwa neyevakuru mainjiniya, vagadziri uye nyanzvi yehunyanzvi vashandi. Iyo yakaunza advanced advanced zvigadzirwa zvekugadzira, uye zvigadzirwa zvayo zvinogadzirwa zvakanyatsoenderana neyakagadziriswa tekinoroji maitiro.
Iyo inotarisira kupa vatengi nehupamhi hwepamusoro, hunoshandisika, riinhi uye yakasarudzika chitarisiko. Chigadzirwa. Panguva imwecheteyo, Kenuo Hardware inogara ichigadzira matekinoroji matsva, maitiro matsva, uye zvigadzirwa zvitsva zvakakodzerwa nemazuva ano ekushongedza Hardware kuti akwanise kushambadzira musika.
Ipa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvinoshanda, novelos uye zvigadzirwa zvakasarudzika. Panguva imwecheteyo, Kenuo Hardware inogara ichigadzira matekinoroji matsva, maitiro matsva, uye zvigadzirwa zvitsva zvakakodzeresa zvemazuva ano zvekushongedza zvemahara kuti zvijairane nekusimudzira kwemusika.
Jiannuo hardware inowana yakawanda vatengi inozivikanwa uye kuonga nemhando yakanaka.
Mutengi kutanga, kusimbiswa kwemhando, Gadzira riinhi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Stainless Steel drain chifukidzo, nyatsovhara, kunyura chifukidziro
304 Stainless Steel Drain Cover, 316 Stainless Steel Drain Cover, Bhurawu Simbi Drain Drain, Airport Drain Cover, Chikoro Drain Cover, Nharaunda Drain Cover.
Stainless simbi yesimbi yejira
Metal Cdecoration Anave maines akagadzirwa nemhete yesimbi yakabatana muhurukuro, ichipa vanhu manzwiro ekurembera anorembera, akanyatsorongeka. Machira esimbi akakodzera kushongedza mudzimba, matenga mall, nhandare dzenhandare, dzimba uye dzimwe nzvimbo, kuti chinzvimbo chacho chinogona kuwedzera chakangwara.
Stainless Simbi Column Pfeka Pipe Fittings, Stainless Simbi Column Musoro, Stainless Steel Decorative Chifukidzo
Stainless Steel Handrail Bracket Stainless Simbi Handrail elbow Stainless Steel Inosvitsa
Simbi isina tsvina ruoko ruoko; simbi isina tsvina ruoko; Stainless Steel Handrail Connector
Parizvino, Jiannuo yakadzora kutengesa kwakasimba uye shure-kwekutengesa sevhisi uye yakagadzira yakanaka kambani mufananidzo, iyo yakave yakafarirwa uye ichizivikanwa nevatengi vedu.
Isu tinotenda kuti pasi pebasa rebasa re "mutengi kutanga, mhando yekutanga", Kenuo Hardware ichaonekwa uye kukosheswa nevazhinji vatengi kumba nevokunze, uye vacharamba vachikura nekusimba.
Kana iwe uine mimwe mibvunzo, tinyorera isu
Ingotitaurira zvaunoda, tinogona kuita zvakawanda kupfuura zvaunofunga.